जीवनमा सिकाइको आवश्यकता - Purwanchal Daily
जीवनमा सिकाइको आवश्यकता
हरुवाको स्थानमा विजेताको नाम दर्ता गराउन कै लागि र हामीले अहिलेसम्म जानेका सम्पूर्ण कुराहरुलाई अपनाई रहेको माध्यम र तरिकाभन्दा अझ विकशित तरिका अपनाएर उन्नत र नयाँ व्यवहारको निर्माण गर्न र उचाइ स्थापित गर्नका लागि मानिसले धेरै कुरा सिक्नु पर्दछ ।
सिक्ने कुरा मानव जीवनमा चलिरहने प्रक्रिया हो । सिक्ने कार्यबाट केही न केही नयाँ प्रतिफल निस्कन्छ । जीवनभर यो प्रक्रिया चलिरहन्छ र यो गतिशील हुन्छ । त्यसैले सिक्ने कुराले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याइरहन्छ । र, जीवनलाई उन्नत र गतिशील बनाइदिन्छ ।
यस्तै कारणले हामी आफ्ना मित्रहरुसँग समयका अन्तरालमा भेट हुँदा उनीहरुका व्यवहारमा फरकपन पाउँछौं । र, हामीमा पनि उनीहरुले केही फरकपन भेट्टाउँछन् । यहाँ हाम्रो सिकाईको कारण हामीमा यस्तो परिवर्तन आएको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले हरेक क्षण केही न केही सिक्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ ।
आजको समयमा सिकेर पनि सामान्यरुपले जान्ने या कम जान्नेहरुको जीवन त पछाडि नै छ । त्यसैले सिकेर पनि सबैभन्दा बढी जान्ने हुनुपर्ने यो समयमा हामीले सिक्ने र जान्ने कुरालाई अझ बढी महत्वका साथ लिनुपर्दछ । अन्यथा हामी यो तीव्र प्रतिस्पर्धाको युगमा सबभन्दा पछाडि पर्न सक्छौं । सिक्ने कुरा समयको विकाससँगै विकशित र गतिशील हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसैले हामी केही कुरा सिक्दैछौं भने हाम्रो जीवनको पछिल्ला दिनहरु उज्ज्वल बनाउने कुरा सिक्नु बुद्धिमानी हो ।
हामीले सोचेका छौं ? कि म आज जे जान्न र सिक्न लालायीत छु, यसले मलाई भविष्य निर्माणमा सहयोग गर्न सक्ला ? पहिला हामी सक्छौं भन्ने कुरामा निश्चित हुनुपर्छ र लगातार त्यसमा अभ्यास गरिरहन सक्नुपर्छ । सिक्ने कुराले हाम्रो व्यवहारलाई प्रगतिशील बनाइदिन्छ । नयाँ ज्ञान दिन्छ र नयाँ प्रविधिहरुसँग हामीलाई साक्षातकार गराइदिन्छ । हामीलाई नयाँ तरिकाले सोच्न र सम्झन सक्ने बनाइ दिन्छ । सिक्ने कुराले हाम्रा नराम्रा आदतहरुलाई परिवर्तन गरिदिन्छ र नयाँ विचारहरुको जन्म गराइदिन्छ ।
हाम्रो जीवनका काम नलाग्ने विचार र सोचहरुलाई विस्थापन गर्ने प्रमुख पक्ष पनि सिक्ने कुरा मै निर्भर छ । सिक्ने कुरा आफैंमा एउटा प्रयोग हो, यसले हाम्रो दिशा परिवर्तन गरी दिन्छ र गतिलाई तीव्रता समेत प्रदान गर्दछ । सिक्ने कुराबाट हामी प्रतिकूल परिस्थितिको पनि उचित ढंगले सामना गर्न सक्ने हुन्छौं । सिक्ने कुराले मानिसको क्षमताको विकास गर्नुका साथै आन्तरिक रुपमा बलियो बनाउँछ । सिक्ने कुराले सोच्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याइदिन्छ र विचारका नयाँ रुपको जन्म हुन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो जीवनको प्रत्येक क्षणमा समय खेर नफाली केही नयाँ कुराहरु गरिरहनु पर्दछ, सिकिरहनु पर्दछ ।
Previous articleजीवन रुपान्तरणका तीन सूत्र
Next articleगरे के हुँदैन ?